Lionel Messi oo Socod ku ciyaarayay kulankii El Clasico…(Xog Yaab leh oo la helay) – Gool FM
Lionel Messi oo Socod ku ciyaarayay kulankii El Clasico…(Xog Yaab leh oo la helay)
Byare December 26, 2017
(Spain) 26 Dis 2017. Lionel Messi ayaa ka mid ahaa xidigihii ugu muhiimsanaa kulankii sabtida ee El Clasico, inkastuu laacibka reer Argentina inta badan kulanka socod ku ciyaarayay misane saameyn ayuu ku lahaa ciyaarta.
Catalans ka ayaa afka ciida u dartay Los Blancos oo mininkeeda joogta iyagoona ku cabay 3-0.
Yeelkeede, xog la helay ayaa sheegeysa in kaabaha Barca Messi uu 83.1% (Boqolkiiba Sideetan iyo saddex dhibic hal) uu socod ku ciyaarayay kubbada kulankii El Clasico, halka uu Rucleynayay 10.8%, wuxuu orod ku ciyaarayay 4.95% halka uu xawaare sare ku orday kaliya 1.15%.
Xogtan waxaa soo wariyay El Periodico kaa oo falanqeynayay bandhiga xiddiga reer Argentine gebi ahaan 90-ka daqiiqo.
Macnaha ay sameynayso xogtan ayaa ah in Messi uu isku dayay inuu ilaashado Tamartiisa (Energy) maadaama uu yahay laacibka kaliya ee Barcelona ee ciyaaray daqiiqad kasta oo La Liga ilaa iminka xilli ciyaareedka.
Ibrahimovic and Lukaku oo is fahmi waayay + Sawirro
''Dad baa xabsi ugu jira 125 kun oo euro, halka Ronaldo uu la gembiyay canshuur dhan 15 milyan''